ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် H.E. Mr. Song Tao / Myanmar State Counsellor Office
By နန်းလွင်နှင်းပွင့်4August 2017
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr. Song Tao တို့ ယနေ့ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနေအိမ်တွင် တွေ့ဆံုံပြီး မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး က သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အရေးများကို H.E. Mr. Song Tao နှင့် ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ တတ်ရောက်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ H.E. Mr. Song Tao နှင့်အတူ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟုန်လျန် တတ်ရောက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် တွေ့ရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ယနေ့ည ၊ ညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံသည်ဟု နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မစ္စတာ ဆောင်းတောင်၏ ယခုခရီးစဉ်တွင် မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ် မထုတ်ပြန်သေးသော်လည်း မြောက်ပိုင်းဒေသ တင်းမာမှုများ၊ ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ရိုဟင်ဂျာဟုခေါ်သော ဘင်္ဂါလီ ပြဿနာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ ဝင်ရောက် လာသူများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မွတ်စလင် အခြေခံဝါဒီများ၏ လှုပ်ရှားမှု ကြီးထွားလာခြင်း အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်လှသော ပြဿနာ အများအပြားကို ဆွေးနွေးမည်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းနေမှုများလည်း ရှိနေသည်။
H.E. Mr. Song Tao က မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၊ နာယက ဦးတင်ဦးထံ လည်း ကျန်းမာရေးသတင်း မေးမြန်းရန် သွားမည်ဟု NLD နှင့် နီးစပ်သူများက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံံ့ဖြိုးရေးပါတီ တာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဧရာဝတီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မစ္စတာ ဆောင်းတောင် သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သူ၏ ၄ ရက် ကြာ ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးသန်းရွှေ၊ ဦးရွှေမန်း တို့အပါအဝင် NLD နှင့် USDP ပါတီတို့မှ ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူ အချို့နှင့် တွေ့ဆုံသွားသည်။